HIgh Quality MTA Milling machine tool holder China Manufacturer
Home > Products > Tool Holders > BT Fitaovana tompona MAS403 > HIgh Quality MTA Milling machine tool holder
Model No.: BT-MTA
Sokajy: 1, mpihazona mofomamy mozika (MTB)
2, ny mpihazona bit kely Morse (MTA)
Fepetra: MTA dia mety amin'ny fametrahana ny rindran-damina ampiasain'i Morse, ny fitaovam-piadiana sy ny fitaovana tsy misy mari-pamantarana.
Ny MTB dia mety amin'ny fametrahana tsipaipaipaipaoro tsy misy mari-pamantarana amin'ny rambon-tsambon'i Morse.
Mba hanatanterahana ny fizotran'ny lavaka lalina amin'ny maty, ny mpihazona fitaovana MTB dia manana karazana lava sy lava lava.
Alohan'ny fampiasana dia aoka ho azo antoka ny manadio ny lavaka fisakafoanana mba ahazoana antoka fa tsy misy fatotra na mety hisy fiantraikany amin'ny fahasosorana izany, ka miteraka ny "fihenan'ny hery" ny fitaovana.
Ny fitaovana dia tokony esorina amin'ny fotoana izay tsy ampiasana fitaovana. Fotoana lava sy tery no mety hahatonga ny fitaovana hipoaka.
High Speed ​​BT40-GSK16-100 G20.5 Hazo fotsy
HIgh MTA Tool Holder Mpandrindra milina fanontana milina High Precision Cnc High Quality High Precision 5C High Precision Nut High Particle Tours
Mpandrindra milina fanontana milina
High Precision 5C
High Particle Tours